ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jaroslav Dolecek အားလက်ခံတွေ့ဆုံ | Commerce
Tue, 10/01/2019 - 08:41 -- adminDep
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့၊ (၁၄:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jaroslav Dolecek အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ (၁) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ